I-Metrobus | RayHaber
[08 / 12 / 2019] Ngabe kuzoba nesiteshi sesitimela eGürsu esifundeni iBursa?	I-16 Bursa
[08 / 12 / 2019] Yisiphi isitimela esiya eBursa?	I-16 Bursa
[08 / 12 / 2019] I-Bandırma Railway Line iku-Ajenda Yotshalomali	I-16 Bursa
[08 / 12 / 2019] I-Bursa High Speed ​​Project Project kumele ixhaswe Izikweletu Zangaphandle	I-16 Bursa
[08 / 12 / 2019] Ukumenyezelwa kohlu lwe-TÜVASAŞ 2020 lwe-Trainee Spring	I-54 Sakarya
IkhayaHighwayIzinhlelo zeThire zeTrimeMetrobus
Izindaba ze-BRT, izingozi ze-BRT, amamephu we-BRT, imizila ye-BRT, ukukhushulwa namanje kwe-BRT
Kuqalwe Abasebenzi Bokuphepha Kwabesifazane BaseMetrobus Line
Zonke izinsuku abantu abangaphezu kwesigidi esisodwa bahambela umugqa we-Metrobus, oqukethe iziteshi ze-44. Abesifazane abasebenza ngaphansi kohlaka lwezibopho ezichazwe eMthethweni Wezokuphepha Oyimfihlo nemigomo ehlobene nalo [Okuningi ...]
Ama-Metrobus Amabili Ahlanganisiwe eFikirtepe Metrobus Stop; IFikirtepe metrobus ime kule ngozi eyenzeke kusihlwa, kusolakala ukuthi umshayeli we-metrobus uhambe, ngenxa yemvula emgwaqweni oshelelayo wehluleka ukulawula isondo elalihamba. [Okuningi ...]
Imihlangano yesabelomali se-IETT's 2020 yabanjwa ngezikhathi zikaNovemba woMhlangano we-IMM. SözcüIsazi nokuphepha komgwaqo uDkt. Suat Sarı wenze inkulumo ebhekisisa isabelozimali. Kuzothathwa umugqa weMetrobus enkulumweni yakhe [Okuningi ...]
IETT 2020 Ngekhono Eliphezulu Izothola Ithuluzi le-Metrobus le-50
UMkhandlu Wakwa-IMM uvumele iSabelomali Sonyaka we-2 soMqondisi Jikelele we-IETT we-980 billion XLUMX billion TL. Umphathi Jikelele we-İETT uHamdi Alper Kolukısa uthe e2020, bazothenga i-2020 ephezulu kakhulu [Okuningi ...]
Ama-Metrobus Stops Signs Ukulinda Isikhathi Sokuqalisa Isikhathi
Isikhathi sokulinda iMetrobus Stop Signs siqala; I-IETT, ama-Metbbus eyeka aqala ukubeka izimpawu ukuze izakhamizi zilinde endaweni efanele. Iziteshi ze-Zincirlikuyu ne-Şirinevler ezethulwe kuhlelo lokusebenza, zizosakazeka kuzo zonke iziteshi ngokuhamba kwesikhathi. I-Metrobus Line [Okuningi ...]
Ukuchazwa nge-Elevator Emangazayo esiteshini seMetrobus
Umasipala wase-Istanbul Metropolitan (IMM) Kucukcekmece Beşyol Metrobus Stop ngenxa yokuthi isifiki asiqhutshwa ngenxa yezikhathi ezinzima ze-DHA'nın ezikhubazekile eziqukethe isitatimende esibhaliwe ezindabeni ezenziwe. Isisho esithi “Indawo yokumisa okukhulunywa ngayo [Okuningi ...]
I-IETT General Directorate of Buses in the control yaqalwa ngabashayeli bamabhasi, i-2019 ngonyaka ekuhambeni ikhuluma nezikhulu zeenkulungwane ezazisehlakalweni ze294. I-Istanbul Electric Tram neMihubhe yeMisebenzi (IETT) [Okuningi ...]
I-IETT Psychologists Qaphela Abashayeli beMetrobus
IETT Izazi Zengqondo Zabona Abashayeli beMetrobus; Abashayeli beMetrobus abasebenzela izakhamizi zase-Istanbul amahora angu-7 amahora we-24 baba nezivakashi ezikhethekile ezindaweni zokuphumula. Ochwepheshe bezengqondo be-IETT bafika enkundleni, bachitha isikhathi bekhuluma nabashayeli. izazi zokusebenza kwengqondo, [Okuningi ...]
I-Istanbul Ilungele Ubusika ngohlelo lwe-BEUS
Izinkulungwane zabasebenzi be-6 abayizinkulungwane ze-882 nezimoto eziyizinkulungwane ze-373 zizosebenza ukuvikela ukuphazamiseka kwempilo e-Istanbul. Iphuzu elibucayi le-60 lomuzi lizoqashwa ngokuqhubekayo ngohlelo lwe-BEUS futhi kuzothathelwa izinyathelo zangaphambili zokuvikela izingozi. Istanbul [Okuningi ...]
Nayi iMetrobus entsha ..! U-Ekrem İmamoğlu Uhloliwe; UMongameli we-İBB u-Ekrem İmamoğlu ubambe iqhaza ekuhlolweni kokuhlolwa kwezimoto zemoto yendawo. U-amomamoğlu, oye wama esitobhini se29, [Okuningi ...]
I-Istanbul Metrobus Watches 2019
I-Istanbul Metrobus Hours: Kulezi zikhathi ezikhuluma ngezikhathi zeMetrobus futhi uyama, ungabona futhi imephu ye-metrobus, okuyi-metrobus eseduze yokumisa lapho uya khona kanye nokuma metrobus lapho uya khona. [Okuningi ...]
Imephu ye-Metrobus Stops: Ungabona zonke iziteshi zeMetrobus emephini efanayo, uthole ukuthi yisiphi isiteshi se-metrobus esiseduzane kakhulu lapho uya khona nebanga lokuya endaweni yokumisa metrobus, indawo lapho kuzokuma khona. [Okuningi ...]
Izimoto ezintsha zeMetrobus zase-Istanbul Zikhonjisiwe
Umasipala wase-Istanbul Metropolitan wethula izimoto ezintsha ezizokwakhiwa eBursa ohlelweni lwe-metrobus, okungenye yezithuthi zomphakathi ezisetshenziswa kakhulu edolobheni. Ama-metrobuse amasha okwamanje ahlolwa aqhubeka nokukhiqizwa uma amukelwa yizakhamizi [Okuningi ...]
Imali ekhokhwayo ye-Metrobus ye-2019-2020 I-Lira Emingaki??
Izindleko zokuthola i-metrobus, okungenye yezimoto ezisetshenziswa kakhulu zokuhamba zomphakathi e-Istanbul, ngenye yezinkinga ezibaluleke kakhulu. Kunezimali ezahlukahlukene zemetrobuse ezinikezela ngezinto zokuhamba ukusuka eBeylikdüzü zisiya eSöğütlüçeşme. [Okuningi ...]
I-250 Izinkulungwane ze-TL Swarovski Stone Coated Car at FESPA Eurasia